Dhalinyaro la sheegay inay ku jiraan gudaha Westgate oo Beeniyay Qoraal ay Shabaab daabaceen (War xasaasi ah). - jornalizem
Dhalinyaro la sheegay inay ku jiraan gudaha Westgate oo Beeniyay Qoraal ay Shabaab daabaceen (War xasaasi ah).
Warar kala duwan oo kasoo kala baxaayo Qoysaska Ragg dhawaan ay magacyadooda soo daabaceen Alshabaab oo ay ku sheegeen inay kamid yihiin raggii weerarka ku qaaday Xarunta Ganacsiga weyn Westgate ee Kenya, ayaa si cad u beeniyay Magacyada Carruurtooda ee lasoo daabacay.
Mid kamid ah Ragga la soo qoray Magaciisa oo iminka jooga Sweden, ayaa waxa uu sheegay in Magaciisa lasoo daabacay, balse uusan aheyn ruux ka tirsan Alshabaab gaar ahaan Raggii weerarka ku qaaday Xaruntaasi ganacsi, isagoona sheegay in arrinkaasi uu yahay mid waxkama jiraan ah.
Waxa uu sheegay in fajac iyo la yaab ay ku noqotay kadib markii AlShabaab ay soo bandhigeen Magaciisa, waxa uuna sheegay in sidoo kale uu magacyadda ku dhex arkay mid kamid ah Asxaabtiisa oo aan isaguna shaqo ku laheyn Arintaasi.
Alshabaab ayaa waxa ay dhawaan soo daabaceen Magacyo badan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen Ragga illaa iyoiminka xooga ku heysta Xarunta Ganacsiga, wallow raggaasi ay iska riixeen isla markaana sheegeen inaysan kamid aheyn Kooxda.
Dhanka kale, Waaxaha sirdoonka iyo qeybaha kaladuwan ee booliiska dalka Sweden ayaa bilaabay iney baadigoobaan labadaasi dhalinyarada ah.
Ugu dambeyntii, Mareykan, Britain, Sweden iyo Faransiiska, ayaa waxa ay iminka wadaan Baadi goob ay ku raadinayaan Rag la sheegay inay katirsan yihiin Alshabaab oo horayna loo haayay xogtooda.